ဘုရင်မဘာစားသလဲ။ တော် ၀ င်မိသားစုမီးဖိုချောင် ၀ န်ထမ်းအားလုံးကထုတ်ဖေါ်ကြတယ် - သတင်း
တော်ဝင်မီးဖိုချောင် ၀ န်ထမ်းတွေကဘုရင်မစားတဲ့အရာမှန်သမျှကိုထုတ်ဖေါ်ကြတယ်
သူမ၏ဘုရင်မင်းမြတ်သည် Made In Chelsea ၏ရှေ့တွင်ထိုင်ကာသူမ၏ရင်ဘတ်တွင်ချည်ထားခြင်းနှင့်သူမရဲ့ခြေဖျားမှာချွေးများနှင့်ပြည့်နေခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဖူးလား။ ငါနဲ့တူရင်မင်းရှိတယ်၊ တော်ဝင်မိသားစုမရရင်တောင်မင်းငါ့ကိုအလင်းပေးခွင့်ပေးပါ့မယ်။ ဘုရင်မကြီးဟာရိုးရာအစဉ်အလာအရသူမရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာအလုပ်လုပ်လဲ ဘာကင်ဟမ်နန်းတော် ? ဘုရင်မကဘာစားသလဲ၊ ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကဘာလဲ။ သူမကပီဇာကိုစားသလား သူမ၏ဘုရင်မင်းမြတ်သည်မနက်ခင်း၌ဥများကိုမည်သို့ကြိုက်သနည်း။
ရဲ့ Chase ဖြတ်ကြကုန်အံ့, နှင့်နန်းတော်မှာအလုပ်လုပ်သူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပါဝငျသောအရာကို။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်ပုံမှန်မီးဖိုချောင်အလုပ်နှင့်တူသည်။
ကျွန်ုပ်၏တစ်နေ့တာအများစုမှာအစားအစာများကိုသန့်ရှင်းရေး၊ ၀ န်ထမ်းတွေအတွက်နံနက်စာဘူဖေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီ၊ ပြီးတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးတော်ဝင်နံနက်စာကိုထမင်းကျွေးမယ်။ ထို့နောက်၎င်းသည်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးပြည်နယ်လည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ပါတီများကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းနေ့လယ်စာကို ၁၂ နာရီခန့်တွင်ပြန်လည်စားသုံးပါမည်။ ထို့နောက်တော်ဝင်များနှင့် guests ည့်သည်များအားကိတ်မုန့်နှင့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များပို့ပေးပါမည်။
များသောအားဖြင့်တော့ညနေ ၃ နာရီ ၄ မိနစ်မှာညသုံးညလေးနာရီအဖွဲ့လေးနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။
၎င်းသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသောနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဟုထင်ရသည် - သူသည်ပီဇာကိုစားသည်သို့မဟုတ်ယူဆောင်လာသလား။ ဘုရင်မရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကဘာလဲ။
သူမဟာသူမရဲ့အစားအစာနှင့်အတူကျောင်းဟောင်းဖြစ်နေသည့်နေ့အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သူမ၏အကြိုက်ဆုံးသောကြာနေ့တွင်အသားနှင့် veg, Shepherd ရဲ့ပိုင်နှင့်သင်တန်းငါးနှင့်ချစ်ပ်ဖြစ်ကြသည်။
ဘုရင်မက Pot Noodles ကိုစားမှာလား၊ စားချင်မှာလားလို့မေးခဲ့တယ်။ တော်ဝင်စားဖိုမှူးကဘုရင်မရွေးချယ်ဖို့အစားအစာလေးခုကိုနေ့တိုင်းရွေးပါတယ်။ သူမလိုချင်သောအရာကို tick လုပ်သည်။
ငါ 2018 မှာမရှိတဲ့အချိန်မှာငါတက်ကြွနေတယ်လို့ Facebook ကဘာကြောင့်ပြောတာလဲ
သူမအများအားဖြင့်နံနက်စာစားရန်အတွက်သီးနှံများ၊ သစ်သီးနှင့် toast များရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူမကြက်ဥနှင့်ဆော်လမွန်ငါးပေါက်များရှိသည်ဟုသူကပြောသည်။
သူမကသူမ၏ကင်ညစာသို့ tucking ရဲ့သည့်အခါအလားတူအပြုံး
အခြားတော်ဝင်များသည် ၀ န်ထမ်းများနှင့်အနည်းငယ် ပို၍ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ မင်းကတခြားနန်းတော်တွေဆီကိုသွားရင်မင်းကိတ်၊ ဝီလျံတို့နဲ့စကားပြောခွင့်ရမယ်၊ Edinburgh Duke ကမီးဖိုချောင် ၀ န်ထမ်းတွေနဲ့စကားပြောရတာကောင်းတယ်။
မီးဖိုချောင်တွင် ၀ န်ထမ်း ၁၈ ဦး ၀ န်းကျင်ခန့်ရှိပြီးသူတို့သည်စားနပ်ရိက္ခာများထုတ်လုပ်ရန်ထွက်ကုန်များရရှိကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ ဒေသခံ Lidl ရုံတော်ဝင်များအတွက်ဖြတ်မည်မဟုတ် - ချက်ပြုတ်အမဲသားအများစုပုဂ္ဂလိကအိမ်များကနေရရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်သည့်အခါလူမြိုးအရူးသွား၏ ဘုရင်မကြီးက The Crown Netflix ကိုကြည့်ပြီးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ဒီတော့ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက်ကတီဗီရှေ့မှာထိုင်ပြီးစားနေတာလား။
သူမသည်သူမသူမ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လျှင်, ညစာစားပြီးနောက်တီဗီကြည့်ဖို့ကြိုက်တယ်, သူကပြောပါတယ်။
ဘုရင်မ၏ပုံရိပ်အားလုံးသည်သူမ၏ငါးများနှင့် Coronation Street ပျက်စီးနေသောစောင့်ကြည့်နေသည့်ချစ်ပ်များနှင့်အတူဆိုဖာပေါ်လှိမ့်ထွက်သွားသည်။
၀ န်ထမ်းများကလည်းကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကြသည်။ သူနေထိုင်သောအခန်းများသည်အိပ်ရာကြီးတစ်လုံးပါရှိသည်။ ၎င်းသည်သူကိုယ်တိုင်စုပ်ခြင်း၊ သူနှင့်သူမနှင့်အခြားတစ် ဦး အကြားမျှတသောရေချိုးခန်းတို့ဖြစ်သည်။ အိမ်တစ်အိမ်စီတွင်ကိုယ်ပိုင်မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းသုံးခန်းရှိသည်။
ဌာနအားလုံးမှ ၀ န်ထမ်းအမျိုးမျိုးသည်အိမ်များကိုမျှဝေသုံးစွဲကြပြီးအတူတူနေထိုင်ကြသည် တော်ဝင် Mews - အိမ်တစ်အိမ်တွင် ၂၀ အထိ။ လူများစွာသည်အလုပ်မလုပ်သည့်အခါသို့မဟုတ်မတူကွဲပြားသောတော်ဝင်အိမ်များသို့ထွက်ခွာသွားသည့်အခါလူအများတို့သည်အိမ်သို့ပြန်ရန်အချိန်ယူကြသောကြောင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်လူ ၂၀ ခန့်နေထိုင်ကြသည်။
မင်းတစ်နေ့လုံးမင်းမူပိုင်ခွင့်အတွက်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမင်းစိတ်ကူးကြည့်နိုင်တယ်။ မင်းရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုမင်းအချိန်ကုန်ဆုံးချင်တာကမင်းအတွက်ပဲ။ အခြား ၀ န်ထမ်းများမှပြုလုပ်သောတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်အစားအစာကျွေးသည်။
လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ guests ည့်သည်အနည်းငယ်လောက်ပဲ !!
၀ န်ထမ်းများအားလုံးသည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးဘ ၀ များကိုနေထိုင်နေကြသဖြင့်၎င်းတို့တွင်အရာအားလုံးမရှိပါ။ ခရစ္စမတ်ပွဲများကျင်းပခြင်းမရှိ၊ ခရစ်စမတ်အားလပ်ရက်တွင်အိမ်၏ထက်ဝက်ခန့်သာရှိလိမ့်မည် မင်္ဂလာပါ ။
သို့သော်၊ အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည့်နန်းတော်၌အလုပ်လုပ်သူတိုင်းအိမ်ထောင်စုမှလက်ဆောင်ရကြသည်။ သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။
သင့်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ယခုနန်းတော်၌ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့မင်းအဲဒီမှာဘယ်လိုအလုပ်ရလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်ကရေဒီယိုတွင်ကြော်ငြာခြင်းခံရကြောင်းအလုပ်ကိုလူအများသိအောင်လုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟုသူ့အမေကပြောသည်။
• တော်ဝင်မင်းသားအားလုံးဘယ်နေရာကို Uni သွားခဲ့ကြတာလဲ။ အလေးအနက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
• Arthur Chatto ကဘယ်သူလဲ။ ထို့အပြင် Edinburgh လတ်ဆတ်သောသူမထိုက်မတန်တော်ဝင်
• Amelia Windsor နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Edinburgh စတုတ္ထနှစ်နှင့်တော်ဝင်မိသားစု